NK | त्यो पो दशै……
काठमाडौं । बच्चा बेलाको दशै बास्तविक रुपमा एकदम रमाईलो हुन्थ्यो, न कमाउने पिडा न कुनै तनाव बाल्यकालको जिवन बास्तवमा एकदमै सुन्दर हुन्थ्यो । अलिकत टेन्सन सर मिस हरुले दशै तिहार होमवर्क भनेर दिनुहुन्थ्यो । दशै भरि खायो, खेल्यो बसिन्छ जब स्कुलको बिदा पछिको सुरुको दिन सर मिसले होमवर्क सोध्दा कि त कापी हराएको बहाना बनायो कि, ल्याउन बिर्सिछु भन्यो, सर मिसले कानको जरिबुटा उखेल्ने हुन कि एकछिन कुखुरा बनाएर राख्ने हुन?
अलिकत तनाव त्यसकै हुन्थ्यो नत्र बुबाले पिडिंको माथि काठको निदालमा नाम्लोको बरियोको पिङ खेल्दै खल्ति भरि चिउरा हालेर चपाउदै खेल्दाको मजा सायद फर्केर आउदैन होला, बिहान भए पछि ठुला मान्छेले पिङ खेल्न पालो दिदैनन् भनेर ५ बजे नै उठेर पिङ खेल्न गएको सम्झना याद बनेर बसिरहन्छ । अझ पिङ खेल्न टाढा टाढा सम्म साथिभाई मिलेर गईन्थ्यो वास्तवमै खुब रमाईलो थियो त्यो जिवन, बुबाले कपडा किनेर ल्याई दिनु हुन्थ्यो, सायद बर्षमा नयाँ लुगा फेर्ने समय दशै नै हुन्थ्यो ।
घरमा मिठा मिठा परिकारहरु पाक्थ्यो तर चिउरा हत्तपत्त खान नपाईने र दशैमा मात्र कुट्ने हुँदा फुको चिउरा खल्तिमा हालेर कुद्दै खादै गर्दाको मजा छुट्टै हुन्थ्यो । डाँडामा गएर चंगा उडाउने र चंगा काट्ने प्रतिष्प्रधा हुन्थ्यो । दिनभर खेल्ने र रमाईलो गर्दै बाबु आमाको लाडमा हुर्किदै आएपछि पारिवारिक समस्या र अभावहरुबाट परिचित हुँदै गईयो र मन भित्रका रहरहरुलाई थाती राखि जिवन चलाउदै आईयो ।
आउनुस् टाइम मेसिनमा बसेर सँगै यात्रा गरौं बाल्यकालको दशैँमा।
दशैमा गाडीको चटारो
के को गाडीको चिन्ता, के को पिलिनको चिन्ता। सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हुन्थ्यो, कहिले मामाघर पुगिएला र पैसा जम्मा गरौंला भन्ने एकसुत्रीय चिन्ता हुन्थ्यो। कसैकसैको मामाघर त बिहान हिँडेर बेलुकी मात्र पुगिनेसम्म टाढा हुन्थ्यो। त्यसैले टीकाको दिन गाउँतिरै बरालिएर एकादशीका दिन भालेको डाकसँगै हिँड्नुपर्थ्यो। नजिक मामाघर हुनेहरु त घरमा टीका लगाइसकेर खाएको हात पनि मामाघर जाँदाजाँदै बाटाको धारामा धुन्थे, पैसा बटुल्नको हतारले। टाढा मामाघर हुने मामाघर पुगुन्जेल त नजिककाले बुढा मावली पनि ब्याइसक्थे। अनि घर फर्किएपछि कसको पैसा बढी भयो भनेर धक्कु लगाउने कम्ता मज्जा आम्थेन अझ मेरो मामा घर त नजिकै कम्ता रमाइलो हुन्थेन।
सहरमा थरी थरीका पिङ
मामाघरमा आशीक सुनिँदै सुनिन्नँथ्यो। ध्यानजति सिधै पैसामा हुन्थ्यो। भागमा बीसको रातो नोट पर्ने हो कि दशको सेतो अथवा नीलो पचासको भन्ने मात्र ध्यान हुन्थ्यो। दाजुले बीसको नोट पाउनुभयो कि? दिदीले कति पाउनुभयो? आमाले कति पाउनुभयो। मलाई मामाले अरुको भन्दा थोरै पो दिए कि भनेर बडो चिन्ता हुन्थ्यो। कतिपटक त मामाघरमा पहिला पुगे दक्षीणा पनि बढी पाइन्छ भनेर घरका सबैलाई ल आउँदै गर्नू है भनेर एक्लै एक्लै मामाघर पनि दौडिइन्थ्यो।
अहिले त्यो दशैं खै ? काहा हुन्छ त्यस्तो रमाइलो ?
सम्झिदा पनि बिरक्त लागेर आउँछ । समय र काल खण्डसँगै सबै कुरा परिवर्तन हुँदै आउने रहेछन् । यो त भयो हाम्रो पालाको हाम्ले देखेको दशै, अरु बेला कन्जुसाँई गरे पनि यो बेला मन खोलेर कमेन्टमा मैले छुटाएका दशैका रमाइला पाटा लेख्नु होला। यसो मज्जा आओस न पढ्नेहरुलाइ पनि। अहिले कोरोना महामारी संगैको दशै नेपालीको दशा नबनोस! सिंगो शहर कोरोनाले आक्रान्त हुदै गर्दा दशैमा शहरबाट गाउ पस्ने हो भने गाउ पनि कोरोनाले सखाप बनाउनेछ! आउजाउमा रोक लगाउनु पर्दछ नत्र १ लाखबाट कोरोना बिमारी दशै पछि १ करोड पुग्न सक्छ। बाचे दशै अर्को साल मनाउदा हुन्छ। कोरोना संग दशै नमनाउ। यसपालि को दशै कोरोना लाई छोडि दिउ , अर्को बर्ष धुमधाम मानौला !
सबैमा हार्दिक शुभकामना